‘डिशहोममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट’ बाट दुईजनाले पाए रू. १/१ लाख
काठमाडौं (अस) । ‘डिशहोममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट’ योजनाअन्तर्गत डिशहोमका दुईजना ग्राहकले रू. १÷१ लाख पुरस्कार जितेका छन् । असार ५ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकमध्ये भाग्यशाली दुईजनाले उक्त पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन् ।
फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गर्ने ग्राहकले प्रयोग गरेको सेटअप बक्सको क्यास आईडी नम्बरलाई लक्की–ड्रमा समावेश गरी विजेता घोषणा गरेको डिशहोमले बताएको छ । योजनाअनुसार कम्पनीले शुक्रवार साँझ डिशहोमको शो–केस च्यानल नं. १०० बाट पत्यक्ष लक्की–ड्र गरेको थियो ।
डिशहोमले दिएको जानकारी अनुसार ७१९१३८१२७५७ र ०२५५८१८९४०४ क्यास आईडी नम्बरवाहक ग्राहक विजेता बनेका हुन् । योजना अन्तर्गत कम्पनीले अर्को लक्की–ड्र कार्यक्रम आगामी शुक्रवार साँझ ५ बजे आयोजना गर्दैछ । फन्ड ट्रान्सफरसम्बन्धी देशभरका डिशहोम विक्रेता, नजिकैको डिलर वा डिशहोमको ग्राहक सेवा केन्द्रबाट विविध जानकारी लिन सकिने कम्पनीले बताएको छ ।